Ny sakafo alemana - ny fomba mahomby indrindra
Ny toetra mampiavaka ny karazan-tsakafo vaovao dia ny famerenana haingana kilasy very, ary na dia ao amin'ny orinasa miaraka amin'ny mpivady aza, raha ny tompony indray dia manapa-kevitra ny hanaiky ny vatany amin'ny fitsaboana na fitsaboana ara-batana. Matetika ny lanjany dia tsy mahazo noho ny fahazarana mahavelona amin'ny sakafo.
Alim-bavy alemana mandritra ny 2 herinandro
Raha mitsidika toeram-pisakafoanana alemana iray ianao, mifankahalala amin'ny sakafo nentim-paharazana eo amin'ny firenena ary mahita izay azon'ireo Alemana, dia mety ho sahiran-tsaina ianao: ahoana no ahafahanao mijanona ao amin'ny firenena iray izay misy ny menaka maina voamadinika, sausages, hamburgers ary karazan-tsakafo rehetra. Etsy ankilany, Rosia tsy misy fahasamihafana amin'ny alemana amin'ny resaka sakafo. Ny fiharian-karena alemà dia novolavolaina tamin'ny fomba iray izay tsy vitan'ny olona iray ny mamoaka vola fanampiny, saingy nahazo kolontsaina vaovao momba ny fihinanana sakafo.
Nanamboatra singa 2 amin'ny endriny ny nutritionists nandritra ny vanim-potoana hafa:
Ny fitsaboana mandritra ny 7 herinandro dia fitsapana tena izy, izay miandry ireo mikasa ny handratra amin'ny 17-20 kg.
Ny sakafo mora kokoa nefa mahomby, Allemagne roa herinandro dia ahafahanao "mitsipaka" 7-8 kg.
2 herinandro - fotoana fohy. Ao anatin'ny fotoana fohy dia sarotra ny manaisotra fahazarana taloha. Na izany aza, ireo fitsipika izay ambaran'ny alim-bary alemana roa herinandro dia azo ampiasaina amin'ny ho avy mba hihazonana ny lanjany:
ampahany madinika sy fanilanana ny sakafo rehetra;
sakafo matsiro sy mena;
ny vokatra voatsoaka, nahandroina ary nokasihina;
fampiasana menaka oliva sy jiro misy menaka ho an'ny sakafo fisakafoanana;
fandavana ny vokatra lafarinina, siramamy ary siramamy;
fampiasana tsy tapaka rano madio; izay afaka manafoana ny hanoanana .
telo sakafo isan'andro.
Ny sakafo alemana mandritra ny 7 andro
Mba hamitana ireo olona tena maniry hanamora ny fisiany, dia ara-bakiteny sy ara-boajanahary, mandritra ny fito herinandro mandritra ny herinandro alemana, ny fomba tsy tokony hanova tanteraka ny habetsaky ny sakafo aterak'izany na ny votoatin'ny kaloria. Ny safidy tsara indrindra dia ny fampiasana sakafo mandritra ny roa herinandro mandritra ny 7 andro:
Ny sakafo maraina - dite tsy misy sakafom- bary na kafe sy dipoavatra mofomamy na jiro jiro voajanahary.
Sakafo - sakafom-biby na trondro miaraka amin'ny akanjo gasy, na omelety avy amin'ny atody 2 miaraka amin'ny salady legioma vaovao.
Ny sakafo hariva - legioma na voankazo sy salady voangory, atody lava na kilaometatra avy amin'ny hena sakafo tsy misy garnish.
Ny sakafo alemana Marlene Dietrich
Maro ny olo-malaza: mampiseho lehilahy, modely, kintan'ny pop - mba hahatonga ny vatanao ho tsara sy hitazona ny lanjany tsara dia ahafahana manao fanatanjahan-tena sy sakafo. Marlene Dietrich, ilay mpihira malaza sady mpilalao sarimihetsika, marika famantarana ny taona 1930, dia tsy mitovy amin'ny endrika lehibe. Mba hanamafisana ny firindran'ny tarehimarika nandritra ny taona maro, dia nanampy ny sakafo alemana izany. Araka ny filazany azy, fahatsapana hanoanana, dia maneho ny fahaizan'ny famoronana ho tsara lavitra noho ny ora maro mandresy ny famerenana.
Ao amin'ny fiharian-karena amin'ny mpilalao sarimihetsika, misy legioma, voankazo, henan'omby matavy, siramamy mafy, atody sy trondro. Vita amin'ny alàlan'ny famonoana na fikarakarana ny vokatra, ny salady dia atambatra amin'ny solika. Toy izao ny fihinanan-tsakafo isan'andro:
Ny sakafo maraina : dite na kafe tsy misy siramamy amin'ny toast.
Sakafo : salady voankazo mitafy menaka sy voankazo.
Mandritra : 200 g ny voam-bary (siramamy atao tsinontsinona), voly raha azo atao ary atody rojo nohanina.
Ny hatsaran-tarehy noforonina avy any Alemana Heidi Klum dia nanomboka ny asa fanorenana azy tamin'ny faramparan'ny taona 90. Ankehitriny, ity mpanolotra fandaharana malaza sy reny manan-janaka efatra ity dia mbola manana endrika lehibe. Ny tsiambaratelon'ny fahatanorany sy ny firindrany dia isa-maraina sy mihinana. Heidi Klum menus dia vita avy amin'ny vokatra ambany karba. Taorian'ny fotoan-tsarotra tamin'ny fahazoana lanjany be loatra, toy ny fitondrana vohoka, dia mihevitra ny famokarana ho toy ny famonoana sakafo misy laktika sy karaoty.
Dibera (telo andro). 1M ny ronono dia moana mandritra ny andro, isaky ny 2-3 ora. Tsy misy sakafo hafa.
Kakazo (tapa-bolana) sakafo. Ny sakafo maraina - afon-tsakay sy 200 g siramamy siramamy, sakafo antoandro - salady salady miaraka amin'ny paoma sy karaoty, sakafo - siramamy tsy misy hena avy amin'ny voanio siramamy (tsiro toy ny sauerkraut rosianina).
Mahalala ny modely 48 taona nataon'i Claudia Schiffer nandritra ny taom-polo taonany maro, ny sakafo isan-karazany dia ahafahanao mihazona fahazavana sy fahamendrehana. Ny mahomby indrindra amin'izy ireo dia fihinam-bozaka, izay antsoina hoe "sakafo amin'ny modely" na "ny fiharian-karena Claudia Schiffer". 3 andro, tsy maintsy tandremana ny fitondrana manaraka:
Ny sakafo maraina - 1 ai ary dite maitso tsy misy sakamandimby.
Rehefa afaka adiny 3, ny sakafo voalohany voalohany - tsaramaso an-trano mavesatra (150 g) ary ny kaopy misy dite maitso.
Rehefa afaka adiny 3 ny sakafo hariva faharoa dia mamerina tanteraka ny voalohany.
Mandra-pahatonga ny sakafo maraina manaraka dia avela hisotro rano ianao.
Diovina amin'ny ampongabendanitra
Sakafo nandritra ny 2 herinandro
Olana tsotra, mahomby mandritra ny herinandro
Andro famoahana amin'ny paoma
Ny sakafo eo amin'ny Detox
Tsy sakafo karaobia: ny sakafo
Misy ve ny afobe sy ny lanitra?
Andraikitra amin'ny fanasitranana
Renee Zellweger dia nanao tafatafa nahaliana tao amin'ny The Hollywood Reporter magazine ary nirehareha tamin'ny sary mahafinaritra
Ny Alhambra any Granada
Ho an'iza ny lokon'ny volom-borona mena?
Bibikely misy tongolobe
Biby misy ovy
Kish miaraka amin'ny akoho
Tart Taten - fomba fanandramana mahazatra amin'ny tsindrin-tsakafo frantsay miaraka amin'ny paoma ary tsy vitan'ny hoe!
Fihetsiketsehana ao amin'ny tovovavy misy reny mampinono
Tranonkala - mahasoa
Ny soritr'aretina amin'ny ovaire - soritr'aretina
Icon "Masina Masina" - midika inona, inona no manampy?
Ny akanjo hoditra rongony ho an'ny ririnina